ओली : चुनाउ अघि र पछि
[2014-01-10 오후 7:28:00]
(केपी शर्मा ओली उखान तुक्के नेता हुन । भाषन, अन्तरवार्ता, गफगाफ, छलफलमा उनले तुक्का नजोडेको प्रसंग नै हुादैन । उसो त ओलीको बोली गोली बराबर भन्ने चलन छ । विरोधीका लागि उनको बोली तित्राको मुखै बैरी भनेझैं हुन्छ । केहि वर्ष अगाडिको कुरा हो, ओलीले चढ्ने गरेको विद्युत प्राधिकरणको गाडि एमाओवादी समर्थित प्राधिकरणका कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिए ।
अनि उनले पत्रकारको मसलाका खातिर यो घटनाको पनि उखानमै जबाफ फर्काए । गाडि त अरु दलका नेताहरुले पनि सरकारी नै चड्थे ओलीको मात्र गाडि नियन्त्रणमा लिएपछि उनले उखानमै जबाफ फर्काए, ‘गोरु नाङ्गै हिाड्दा मैले लाज मान्ने गरेको छैन ।’ ओठे जबाफका माहिर खेलाडी नेपाली राजनीतिमा उखानकै भरमा जमेका छन् । ओलीले आाठापाजा औंशी पुर्नेमा आफनै निवास बालकोटमा महफिल जमाएर समूहसमूहलाई यस्तै उखानको मज्जा पनि चखाउने गर्ने गरेका छन् । संविधानसभा चुनाउ अघि र चुनाउ पछि एमालेकै भातृ संगठन प्रेस चौतारीका पत्रकार केटाहरु ओली मेहफिलको निम्तो मान्न पुगेका थिए । त्यहि मेहफिलमा प्रेस चौतारीका केटाहरु र ओलीबीच भएको वार्तालापको सारसंक्षेप ।)
चुनाउ अघि :
चौतारीका पत्रकार ओली निवास छिर्नासाथ गच्छे अनुसारको स्वरमा सबैले करिव एकैचोटी भने, ‘कम रेड लाल सलाम ।’
यतिकैमा ओलीले बात अलि भिन्न पाराले फर्काए, ‘अब लाल सलाम वाला कुरा गए खोलैखोला । ‘कम’ ‘रेड’ भनेको रातो कम्ति भएको स्थितिलाई जनाउाछ । रातो कम भएपछि हरियो हुन्छ । तसर्थ पत्रकार केटा हो ! ‘हरियो’ वा ‘ग्रिन सलाम’ भन । अब हामी ग्रिन रिभोलुसन अर्थात हरित क्रान्ति गर्छौं । जबज मुताविक हरित सलाम भन्नु मुनासिब हुन्छ ।’
चौतारीसम्बद्ध पत्रकारहरु ओली वचन सुनेर तिनछक्क परे । केही चैं ओलीको कुरोको चुरो बुझेबुझे झैं गरेर टाउको हल्लाउन थाले । केहिचैं गम्भीर सैद्धान्तिक कुरा होला भन्ठानी एकहोरो भए । हरित क्रान्तिको बारेमा जान्ने उत्सुकता भएको झैं गरी केही ट्वा परेर हेर्न थाले । यतिकैमा एक जना राजनीतिका बीट हेर्ने अधबैंसे जस्ता लाग्ने पत्रकारले अरुले मुख बाउदा नबाउादै नेताजीलाई प्वाक्क सोधे, ‘मुंसीरमा चुनाउ हुन्छ ?
ओलीले झटपट जवाफ फर्काए, ‘हरियो परियो पाक्ने दिन नै मुंसीर हो । मुंसीर हरित क्रान्तिको उत्कर्ष हो । असारमा हरियोपरियो मुंसीरमा पहोलपुर । असारमा रोपेको बाली मुंसीरमा भित्राउने हो । अनि मुंसीरमा बाली नभित्राउने को चैं लाटोबुङ्गो छ र ?’
‘अनि वैद्यहरु गोलमेच भन्दै छन् त ?’ तिनै पत्रकारले डराउादै गम्भीर प्रश्न तेस्र्याए ।
‘कुन ठूलो कुरो हो गोलमेच ? गोलो कुर्सी टेवल राख्ने तेसमाथि थपक थपक बसे भैहाल्यो नी । पेरीस डाडामा छैन भने बल्खु र सानेपामा गोलो मेच छ ।’ ओलीले उत्तेजित हुादै प्रश्नको उत्तर दिएर बिट मारे ।
पत्रकारको प्रश्न खस्न पाएको हुादैन ओली फटाक उत्तर दिई हाल्ने गर्नाले पत्रकारले प्रश्न के सोध्ने गम्नै पाउादैन थे । राजनीतिका अनेकान प्रश्न सोधेर ‘एक्सक्लुसिव स्टोरी’ बनाएर मिडिया मालिकलाई खुसी पारेर अड्केको तलब लिने योजना तुहिने संभावना बढेकोमा पत्रकार चिन्तित थिए । ओलीले आफ्नै बारीका पत्रकार ठानीदिादा उनीहरुको रोजीरोटीको मेलो सर्न सकिरहेको थिएन ।
यतिकैमा एकजना नौसिखिया पत्रकारले प्रश्न राखे, ‘एमालेलाइ ‘डन’को पार्टी भनेर गिज्याउाछन यहालाई कस्तो लाग्छ ?’
नौसिखियाको प्रश्नले ओलीको रीस आाखामा आयो । भृकुटी तन्काएर भने, ‘एमालेमा युवा आउादा डन हुने एमाओवादीमा गए क्रान्तिकारी हुने ? एमाओवादीले जस्तो हामीले युवालाइ लुटी खाने भुटी खाने बनाएका छैनौं । पर्शे जस्तो ‘हरिप’ गरिपलाई राष्ट्रिय पुाजीपति बनाका छौं । धादिङ जस्तो बाादर लड्ने भिरमा उडी हिाडने चरीलाई राष्ट्रिय चर्चाको पन्छी बनाका छौं ।’
‘अनि पार्टी फुटेको बेला चुनाउमा जादा.... ?’
एकजना पत्रकारको प्रश्नको पेटारो पुरा भैसकेको थिएन ओलीले कुरा काटी हाले, ‘हात्ति दुब्लाएर मुसा हुादैन । मुसा मोटाए हात्ति पनि हुादैन । नाङ्लो ठटाएर हात्ति पनि तर्सिदैन । पार्टी फुटेको हैन भुत्ला झरेको भनेर हाम्रो पार्टीले ठहर गरिसकेको छ । साापले कााचुली फेर्दा कतै सााप मर्छ ?’
अब भने पत्रकारको प्रश्न भण्डार सकिइसकेको थियो । पत्रकारको बोल्ती बन्द हुादै गएको छााट देखेपछि ओलीले सारगर्भित मन्तव्य राख्न थाले, ‘नेक्पा एमारले कुनै ठेक्पा पार्टी होइन । एमारलेलाई देशी विदेशी मात्र होइन परदेशी समर्थन पनि प्राप्त छ । पहिलेपहिले चौका, पन्जाकोमात्र समर्थन थियो । एसपटकदेखि छक्काको पनि समर्थन भयो । क्रिकेटमा छक्काको ठूलो महत्व भएझैं यसपटक हामी सबैको छक्का छुटाइदिन्छौं । विपक्षीलाई छक्का खन्याईदिन्छौं । लिङ्ग भएका, लिङ्ग हुादै नभएका, समान अर्थात एकै प्रकारका लिङ्ग भएका र उखरमाउलो लिङ्ग भएका सबैको समावेसी हाम्रै पार्टी मात्र भएको छ ।’
ओली झोक्किादै गए, ‘यस्तो पार्टीलाई छोडेर जानु भनेको भदौमा आाखा फुट्नु बराबर हो । संघीयता भनेको एता न उता हो । नेपाल जस्तो सानु देशलाई पर देशमा बााडेर मूख्यमन्त्रीको बथान बनाउने ? अनी सिमित साधन स्रोत भएको देशमा के ले पुर्‍याउने ? कतिपय पर देशमा गाडिको बाटो पुगेकै छैन । अनि मूख्यमन्त्रीलाई घोडा दिने ? अनि त्यै घोडाको टाउकोमा झण्डा बाध्ने ? यस्तो जात्रा त धुर्मुसेले पनि गर्दैन ।’
अन्त्यमा आदेशको भाषामा ओलीले पत्रकारलाई अह्राए, ‘ओलीले गााजा खाएर बोली रहेको छैन । जाउ, मुंसीरमा एमारलेको बाली भित्राउने कामको पर्चारमा जुट । हाम्रो पार्टीले तिनतिहाई मतले जित्दैछ भनेर रेडियो, टीभीमा खोक, कागे अक्षरमा लेख, परेको युथ फोर्सले व्यहोर्ने छ ।’
ओलीको यो आदेशपछि पत्रकार पनि चाल मारेर कुलेलम ठोके ।
चुनाउ पछि :
(चौतारीका तिनै पत्रकार ओली निवास पुगे । ओली बरण्डामा ओभरकोटमा सजिएर काजु चपाइरहेका थिए । पत्रकार केटाहरुलाई गेटमा देख्नासाथ रिमोटबाट गेट खोलिदिए । पत्रकारले जम्लाहात गर्दै एकै चोटी भने ‘जबज अभिवादन ! हरित सलाम हजुर !’ हातले इसारा गर्दै बैठक कक्षमा आउन ओलीले इसारा गरे ।)
बैठकमा छिर्नासाध बधाइ दिदै एक जना अलि पाका पत्रकारले कुरोको पोयो बटारे –‘गज्जपै भो हजुर । काठमाण्डौमा बौलाएको बिरालो रुकुम गएर घरको खाबो चिथोरेछ ।’ ओली आफ्नै डायलग सापटीमा बोलेको सुनेर मन्दमन्द मुस्कान छर्दै थिए । आाफुले दिएको प्रशिक्षण कण्ठस्थ सुनाएकोमा मक्ख पर्दै थिए ।
अर्का पत्रकारले प्वाक्क भनी हाले –‘बनमाराले पीपलको विरुवा छोप्यो भनेर चिन्ता नगरे हुने रैछ, पीपलको बोट बढेपछि बनमारा आाफै तह लाग्ने रैछ ।’
ओलीले यो डायलग सुनेपछि झनै मक्ख पर्दै गए । आफैले दिएका दिव्योपदेश विद्यार्थीले पाठ बुझाएझै फर्र पत्रकारको मुखाग्र सुन्दा उनको हर्ष बढदै थियो ।
एतिकैमा अर्काले फेरी कुरा तोपे –‘दूई माना दूध उम्लिएर एक पाथी जाने डेक्चि भरिएको जस्तो मात्रै पो रैछ एमाउवादी ।’ सृङखलाबद्ध रुपमा आफ्नो डायलग आउादा ओली छक्क पर्दै गए ।
राजनीतिको विश्लेषण गर्ने अर्का सदावहार स्तम्भकार पनि के कम उनले अलिकति घााटी सफा गरे, घुटुक्क थुक निले र सारगर्भित भनाइ राखे –‘वेद पढाएर, वेदका मन्त्र सुनाएर गोरुले जोत्दो रहेनछ, गोरुलाई जोताउन लौरो नै चाहिने रैछ । यसपटक जनतालाई यो दिव्य ज्ञान भएजस्तो छ ।’ उनको विश्लेषणमा आफ्नै डायलग सुनेर ओली झनै गमक्कै भए ।
चुरो कुराको लागि अर्का पत्रकार पनि छलफललाई बिट मार्ने हिसाबले एमाओवादीलाई असार साउनको बर्खे छाते च्याउको उपमा दिादै सटिक जबाफ फर्काउन उठे–‘झुसिल किराबाट पुतली बनेपनि, झुसिल किरालाई पुतली भनिदैन ।’ ओली आफ्नै डायलग सुनेर फुरुङ्ग भए ।
अनि ओलीले सबैलाई जाने इशारा गर्दै भने –‘तिमेरु जम्मै सिद्धान्तनिष्ठ धुर्मुसे भन्दा कम भएनछौ ।’